Chinese aviation regulator inomisa ndege mbiri dzenyika dzese pamusoro penyaya dze COVID-19
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » avhiyesheni » Chinese aviation regulator inomisa ndege mbiri dzenyika dzese pamusoro penyaya dze COVID-19
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Bangladesh Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • China Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • Health News • Nepal Kuputsa Nhau • nhau • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
The Civil Aviation Administration yeChina (CAAC) yazivisa nhasi kumiswa kwevhiki-rimwe kweBangladeshi US-Bangla Airlines Dhaka-Guangzhou nendege yeHimalaya Airlines Kathmandu-Chongqing mushure mekunge vamwe vafambi venhandare dzendege idzodzo vaedzwa kuti vane coronavirus.
Sekureva kweChina mutyairi wevashandi vehurumende, vafambi vatanhatu vakaedza kuongorora Bangladeshi US-Bangla Airlines ndege BS325 musi waNovember 1, nepo vatanhatu vakaedzwa pa ndege H9787 yeHimalaya Airlines, mubatanidzwa weNepal neChina, munaNovember 4.
Kumiswa kwendege yeUS-Bangla Airlines kuchatanga kubva munaNovember 16, nepo iyo yeHimalaya Airlines ichatanga kubva munaNovember 23, uye ese ari maviri achatora mazuva manomwe ekarenda.
Iyo CAAC yakaunza mubairo uye nzira yekumisa musi waChikumi 4 kuti iwedzere kuve nekupararira kwe COVID-19.
Zvinoenderana nemutemo weCAAC, kana vese vakapinda mukati meyero yendege isina kunaka kune COVID-19 kwemavhiki matatu akateedzana, ndege inoshanda ichabvumidzwa kuwedzera huwandu hwendege kusvika mbiri pasvondo.
Kana huwandu hwevapfuuri vanoyedza vakawana hunosvika pamashanu, nendege dzendege dzichamiswa kwevhiki. Kumiswa kwacho kunotora kwemavhiki mana kana huwandu hwevapfuuri vanoyedza vakanaka vanosvika gumi.